Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Brand USA waxay India ku haysaa Radarkeeda Virtual
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Taalada Xorriyadda oo laga arkay doonnida Circle Line, Manhattan, New York
Suuqa caalamiga ah ee Brand USA waa mid siyaabo badan u gaar ah, oo aan ugu yaraan loo gudbin farriin cod dheer oo cad u ah daneeyayaasha safarka iyo dalxiiska ee Hindiya in Mareykanka ay dhab ka tahay soo celinta suuqa Hindiya, mar haddii safarkii dib u soo noqdo, dhajinta COVID.
Brand USA waxay qabatay kulan dalwad ah 11 -kii Ogosto, 2021, oo ay hoggaaminayeen daneeyayaasha safarka Hindiya iyo dalxiiska.
Waxaa dib u xaqiijisay Brand USA in Hindiya ay weligeedba ku jirtay raadaarkeeda.
Wakiilada USA iyo India labaduba waxay si xamaasad leh u sugayaan sugitaanka safarka, dalxiiska, duulista hawada, soo dhaweynta, wax kasta oo aad rabto inaad magacowdo.
Xitaa intii lagu jiray xilligii COVID, Mareykanka wuxuu sii waday barnaamijkiisa wacyigelinta waxa ka socda Hindiya. Soo bandhigid Ogosto 11, 2021, kaas oo isugu keenay, goob madal ah, hoggaamiyeyaasha socdaalka ugu sarreeya iyo dalxiiska ee Hindiya, Brand USA waxay ka wada hadleen ujeeddadeeda ah inay kor u qaaddo oo suuqgeyso USA gudaha Hindiya. Brand USA waxay xaqiijisay in India ay waligeedba ku jirtay raadeerkeeda, soo-bandhigayaashii kulankana waxay bixiyeen xaqiiqooyin iyo tirooyin si ay u xusuusiyaan daawadayaasha in tirooyinka pre-COVID kaliya aan la buuxin doonin laakiin ay aad uga badan karaan.
Dhinaca hore ee isku xirnaanta, arrimuhu way soo hagaagayaan iyadoo duulimaadyo badani meesha yaalliin, mar labaad, marka hore loo sii socdo. Saraakiil sarsare oo ka tirsan Brand USA ayaa halkaas u joogay inay u sheegaan ciyaartooyda India inay jiraan wax badan oo ka dhexeeya labada dal si kor loogu qaado safarka. Dhinaca Hindiya ee kulanka tooska ah waxaa hogaaminayay Sheema Vohra oo muddo dheer hormuud ka ahayd dallacsiinta Mareykanka ee Hindiya.
Tababarka Ganacsiga Socdaalka
Iyada oo loo marayo Brand USA, abaalmarinta ku guuleysatay Barnaamijka Daahfurka USA ayaa kordhay 64% marka la barbardhigo sanad-sannadeedka. Barnaamijku wuxuu bixiyaa webinarsyo waxbarasho oo dhiirrigelin leh wuxuuna tababaray 10,113 wakiil tan iyo 2020 illaa maanta.
Sannadkii 2019, 1.47 milyan Soo -booqdayaasha Hindiya u safray si uu khibrad ugu yeesho Mareykanka, isagoo ku biiriyay dhaqaalaha Mareykanka $ 14.2 bilyan. Tirada booqdaha Hindiya ayaa hoos u dhacday 77% sannadka 2020 marka loo eego 2019, halka qarashka uu ka yaraaday 45%. Bishii Juun 2021, wadarta guud ee rakaabka hawada ee aan joogsiga lahayn ee Hindiya ilaa Mareykanka ayaa hoos u dhacday 59% marka la barbar dhigo Juun 2019.
Macluumaadka Booqdaha Hindiya
Sannad caadi ah, 18 gobol ayaa hela 2% ama ka badan wadarta tirada booqdaha Hindiya. Tani waxay taageertaa dadaallada Brand USA ee lagu dhiirri-gelinayo socdaalka caalamiga ah ee miyiga ama meelaha aan la aqoon ee ku yaal Mareykanka oo dhan sida uu farayo Xeerka Horumarinta Safarka. 63% waxay booqdaan hal gobol oo keliya inta lagu guda jiro booqashada Mareykanka, taas oo isbarbar dhigaysa 76% dhammaan waddamada dibedda. Qiyaastii 13 milyan oo habeen oo qol ah oo la ballansaday sannadka 2019, Hindiya waxay kaalinta afaraad ka gashay habeenada qolka ugu badan suuqyada oo dhan. Ujeeddada ugu weyn ee safarka ugu weyni waa ganacsi 35% dhammaan booqdayaasha sannadka 2019 - heer 3 jeer ka sarreeya celceliska dhammaan waddamada dibedda. Ujeedooyinka kale ee safarka ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah VFR (booqashada saaxiibbada iyo qaraabada); fasax/fasax; iyo ka qaybgalka shirka, shirarka, ama ganacsiga.
Xiritaanka kulanka dalwaddu, ma jirin jawaab cad oo su'aal muhiim ah: Goorma ayaa dalwaddii lagu beddeli doonaa dhab?